Maraykanka Oo la filayo in Qudus uu u aqoonsado caasimadda Yahuudda. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Dec 6, 2017 230 0
Hadal maanta oo arbaco ah jeedin doono madaxweynaha cunsuriga ah ee Maraykanka ayaa la sheegayaa inuu ku shaacin doono markii ugu horaysay in magaalada barakeysan ee Al-Qudus ay tahay caasimadda maamulka Yahuudda.
Saraakiil sar sare oo katirsan Aqalka cad ayaa warbaahinta u sheegay in Donald Trump hadalka maanta uu jeedin doono ku sheegi doono in Qudus ay tahay caasimad ay leeyihiin Yahuudda, sidoo kalena amir doono in safaaradda Maraykanka ee Talla’biib uu ku leeyahay loo soo raro magaalada Al-Qudus.
Donald Trump ayaa iska dhega tiray talooyin ay usoo jeediyeen madaxda dowlado badan oo caalamka katirsan, kuwaas oo sheegay in tallaabadan ay abuuri karto amni daro hor leh, iyagoona ka baqaya in Muslimiinta ay kiciso.
Afhayeenad u hadashey Aqalka cad waxay sheegtay in Donald Trump uu khadka teleefanka kula xiriiray madaxda dowladaha Aala-Sucuud, Urdun, Masar iyo kuwa kale, isagoona ka xog wareystay arintan, waxaana ay sheegtay ugu dambeyn in maanta go’aankiisa ugu dambeeya uu shaacin doono.
Yahuudda ayaa aad ugu faraxsan hadalkan la filayo inuu jeediyo Trump, halka dadka muslimiinta ay u arkaan tallaabo hor leh oo lagu sharciyeyn rabo gumeysiga Yahuudu ku heystaan dhulka muslimiinta ee Filastiin.